Naadiyada Cannabis ee Barcelona waxay wajahayaan xirnaansho dhanka sharciga ah • Dawooyinka Inc.eu
200 oo ka mid ah kooxaha xashiishadda ee Barcelona ayaa wajahaya in la xiro ka dib markii maxkamada sare ay heshay daldalool sharci ah.
Waa middii ugu dambeysay taxane dib u dhac ku ah asociaciónes, maadaama loogu yeero. Sanadkii 2017, maxkamaddu waxay diiday sharci uu meel mariyey baarlamaanka Catalan oo sheegaya in "isticmaalka gaarka ah ee xashiishka dadka waaweyni ay qayb ka tahay ku dhaqanka xuquuqda aasaasiga ah ee xoriyadda horumarka shakhsiga iyo xorriyadda damiirka".
Tan iyo markaas, kooxaha Barca waxay ku shaqeynayeen sharci magaalada ah, laakiin tan sidoo kale hadda waa la rogay. Garsoorayaasha ayaa xukumay in mas'uuliyiinta magaalada aysan awood u lahayn inay sharci ka soo saaraan arrimaha ay maamusho gobolka.
Xidhitaanka naadiyada xashiishadda
Eric Asensio, oo ah afhayeenka Xiriirka Bulshada Cannabis ee Bulshooyinka Catalans ayaa yiri: “Kooxaha badankood waxay u maleynayaan in goor dhow ama goor dambe ay qasab noqon doonto inay xirto”. Qiyaastii 70% ka mid ah Spaanse naadiyada xashiishadda waxay ku yaalliin Catalonia, inta badan Barcelona.
Naadiyada xashiishka waxay noqdeen goob weyn oo iibinta dalxiisayaasha. Magaalada, oo taageerta xaaladda sharci ee kooxaha iyo ururada, ayaa sheegtay in xukunkii ugu dambeeyay ee maxkamadda uu mamnuucayo "iibinta, cunista ama kor u qaadista" xashiishka. Taasi waa sababta kooxaha loo kormeeri doono muddada gaaban. Laga bilaabo naadiyada leh saameynta ugu xun ee loogu talagalay dalxiisayaasha iyo iibka ballaaran.
Ururadu waxay kubilaabeen naadiyo khaas ah oo xubnuhu ka iibsan karaan kana cabi karaan xashiishka gudaha. Sanadihii la soo dhaafay, qaar badan ayaa ka leexday qaabkan si ay u noqdaan goobo lagu iibiyo xaddi badan oo xashiishad ah oo ku baxda Catalonia. Naadiyadaan waxaa badanaa iska leh yurubta bari iyo maafiyada kale. Si kastaba ha noqotee, ururada, golaha magaalada iyo booliisku waxay dhammaantood isku raaceen in naadiyadu yareeyaan ganacsiga waddooyinka iyo isticmaalka. Booliska wuxuu mabda 'ahaan sheegay inaysan kasoo horjeedin naadiyada.
Akhri wax dheeraad ah theguardian.com (Source, EN)
British Isle of Man waxay meel marisay sharciga xashiishka ee beerashada iyo dhoofinta
Shuruucda cusub ee jasiiraddu waxay suurtogal ka dhigaysaa in la siiyo rukhsaddaha lagu isticmaalo xashiishadda ...
Shirkadda marijuana ee Kanada Aurora Cannabis (ACB) ayaa war ka dhigtay Isniintii, toddobaad ka dib markii ay tartamayaasha ...